Clive Baakadaha La Isku Qurxiyo - Joornaalka Naqshadeynta
Baakadaha La Isku Qurxiyo
Baakadaha La Isku Qurxiyo Fikradda baakadaha qurxinta Clive waxay u dhalatay inay kala duwanaato. Jonathan kaliya ma uusan dooneynin inuu abuuro nooc kale oo la isku qurxiyo oo ay la socdaan alaabada caadiga ah. Go'aansaday inuu sahamiyo dareen xasaasi ah iyo inbadan oo uu aaminsanahay xaga daryeelka shaqsiyeed, wuxuu kahadlaa hal hadaf oo weyn. Isku dheelitirka jirka iyo maskaxda. Iyada oo la adeegsanayo naqshadeynta Hawaiian, isku dhafka caleemaha kuleylaha, mugga badda, iyo khibradaha xasaasiga ah ee baakadaha ayaa bixiya dareenka nasashada iyo nabadda. Isku-darkaan ayaa suurtogal ka dhigaya in la keeno khibradda meeshaas qaabeynta.
Magaca mashruuca : Clive, Magaca naqshadeeyayaasha : Jonathan Nacif de Andrade, Magaca macmiilka : Cosmetics Clive.
Baakadaha La Isku Qurxiyo Jonathan Nacif de Andrade Clive